“७५० सिसिको बाइक चढ्ने रहरले तानेको थियो प्रहरी सेवामा”
By vijayafm on	 January 17, 2018 अन्तरवार्ता, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा, लागुपदार्थ दुव्र्यसन गैँडकोटका समस्या – प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दिवस जिसी
गैँडाकोट ईलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दिवस जिसीले सुरक्षासेवामा प्रवेश गरेको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । पाल्पा जिल्लामा जन्मिएर काठमाडाँैको आरआर क्याम्पसमा शिक्षादीक्षा लिनुभएका जिसीले १६ वर्षअघि भरतपुर तालिम केन्द्रबाट तालिम सकेर पहिलो २०५८ साल असार १ गतेबाट प्रहरी सेवाको कार्य सुरु गर्नुभयो । प्रहरी सहायक निरीक्षकमा नाम निकालेर यस क्षेत्रमा आउनुभएका जिसीको पहिलोपटक रुकुममा पोस्टिङ भएको थियो । रुकुमपछि डोल्पा, काठमाडौँ, त्यसपछि प्रतिस्पर्धाबाटै नाम निकालेर युएनको सेवामा बाहिर जानुभयो । फर्किएपछि काठमाडौँ नै आउनुभयो । वि.सं. २०७० सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकाल्नुभयो । यसपछि १५ महिनाको तालिमपछि उहाँ नेपालगन्जमा खटिनुभयो । यसपछि सरुवा हुनुभयो र हेडक्वार्टरमा पुग्नुभयो । यसपछि मात्रै रोजेर गैँडाकोट क्षेत्रको प्रहरी निरीक्षकका रुपमा जिसी आइपुग्नुभएको छ । उहाँ आएको पनि केही साढे २ महिना भइसकेको छ । धेरै ठाउँमा काम गरिसक्नुभएका जिसीलाई गैँडाकोट साह्रै राम्रो लाग्यो । उहाँलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोट छिर्दा, सोधपुछ नगर्ने चलन देखेर अचम्म लाग्यो । यहाँका मानिसहरूले जनतालाई रोक्नु आवश्यक छैन, यहाँ मानिसहरूको सौहार्द व्यवहारका कारण यस्तो नियम बनाइएकाले यसले प्रहरी र जनताबीच राम्रो सम्बन्धसमेत रहेको जिसीको भनाइ छ । आरआर क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा जिसीलाई प्रहरीले ७५० सिसिको सुजुकी बाइक चढेको देख्दा चलाउने रहर जागेर प्रहरी सेवामा जाने इच्छासमेत पलाएको थियो । प्रहरी सेवामा लागेर कहिल्येै पछुतो नलागेको बताउने जिसीलाई यस क्षेत्रको जीवनबाट सन्तुष्ट लागेको छ । करिब साढे २ महिनायता ईलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटको प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रहेर काम गर्नुभएका जिसीसँग गँैडाकोट कस्तो लाग्यो भनेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ जिसीसँग गरिएको कुराकानी ।
यहाँलाई गैँडाकोट कस्तो लाग्यो ?
पहिलो कुरा त मलाई के लाग्यो भने, यो नारायणगढबाट नजिक भएका कारण पनि धेरैले यसलाई चितवन नै भनेर चिन्दा रहेछन्, यसको पहिचान बढाउनुपर्ने देखेँ । यसका लागि कामहरू पनि भइरहेका छन् । गैँडाकोटको वातावरणका विषयमा कुरा गर्ने हो भने यो निकै राम्रो पनि लाग्यो, शान्त वातावरण निकै मनमोहक छ, यहाँ बसाइ सरेर आउनेहरू धेरै रहेछन् । यहाँका मानिस शिक्षित र सभ्य लाग्यो । गैँडाकोटवासी सहयोगी पनि लाग्यो ।
गैँडाकोट रोजेरै आउनुभएको हो ?
रोजेरै आएको हो, मागेरै आएको हो गैँडाकोट ।
सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइरहनुभएको छ अहिले ?
नारायणी पुलदेखि बेल्डीहासम्मको क्षेत्र पर्दछ । माथि चाँहि रतनपुर १८, बसेनी, कोटथरसम्म पनि ईलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटले हेर्दै आएको छ । बेल्डिहामा अस्थायी प्रहरी पोस्ट भर्खरै मात्र स्थापना गरिसकेका छौँ । रतनपुरमा थप एक प्रहरी चौकीका लागि स्थानीयले माग पनि गरिरहेको अवस्था छ । हामीले पनि सम्बन्धित निकायमा लिखित माग पनि गरिसकेका छौँ । सम्भवतः प्रदेशसभाको गठन भइसकेपछि प्रदेश प्रहरीले दरबन्दीका लागि पहल पनि गर्ला ।
गैँडाकोटका दुर्गम क्षेत्रमा कम जानुहुन्छ भन्ने गुनासो छ नि ?
होइन होइन, जानी गरेको छु । हामी बेलाबेलामा जाने गरेका छौँ । म आफै पनि जाने गरेको छु । गाडी नजाने भएकाले बेलाबेलामा मोटरसाइकलमा भएपनि पुग्ने गरेका छौँ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटमा कस्ता कस्ता घटनाहरू आउने गरेका छन् ?
अहिले पछिल्लो समयमा सवारी दुर्घटनाका केसहरू बढी मात्रामा आउने गरेका छन् । यसपछि लागूऔषधका घटना बढी छन् । सेवनकर्ताहरू बढी रहेको पाएको छु । यसैगरी घरेलु हिंसाका घटना बढी छन् यस क्षेत्रमा । यो सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारमा सम्बन्धमा विचलन आएका घटना दर्ताको संख्या बढिरहेको छ । श्रीमान् विदेशमा छ, श्रीमतीले यहाँ पैसा हिनामिना गरेको अर्कैसँग सम्बन्ध बढाएको घटनाले नकारात्मक असरका घटनाहरू आइरहेका छन् ।
यी सबै समस्या समाधानका लागि केकस्ता न्यूनीकरणका काम गरिरहनुभएको छ ?
भइरहेको छ, यस विषयमा जनचेतनका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छाँै । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक सचेतना कार्यक्रम पनि गर्ने गरेका छौँ । केही दिनअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी कावासोतीमा पनि केही जनचेतना कार्यक्रम ग¥याँै । हर्कपुरमा ट्याक्टर व्यवसायीसँग सडक दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सवालमा छलफल पनि ग¥यौँ । यसैगरी विषयगत संघसंस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको छ । कसरी सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनी छलफल भइरहेको छ । यसैगरी घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि बेलाबेलामा जनचेतनामूलक काम गरिरहेका छौँ । यसैगरी विद्यालयका विद्यार्थीबाटै जनचेतना सुरु गर्नुपर्दछ भनेर विद्यालयमा पनि छलफल गर्ने सोचमा पनि छौँ । केही काम पनि भइरहेको छ ।
सडक दुर्घटना किन बढिरहेको होला ?
सडक दुर्घटना बढ्नुका धेरै कारणहरू छन् । तर यहाँ सडक दुर्घटनाका कारणमध्ये सडक साँघुरो हुनु पनि एक हो । बाटो साँघुरो हुनु र प्रयोगकर्ता बढी हुनु प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने हो निर्मूलीकरण गर्न त सकिँदैन होला । न्यूनीकरण गर्ने काम सबै स्टेकहोल्डरहरूको पनि हो तर प्रहरीले मात्रै गर्दियोस् भन्ने मानिसकताको परिवर्तनको खाँचो छ । कानुनले हामीलाई मात्र अधिकार दिएको पनि होइन । यसका लागि सबै पक्षहरू एक भएर समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । घरेलु हिंसाको सन्दर्भमा सम्झाउने, बुझाउने र सकेसम्म मिलाउने काम गर्ने हो नभए मुद्दा चलाउने हो । लागू पदार्थका सवालमा पनि प्रयोगकर्तालाई सम्झाई बुझाई गर्ने परिवारमा बुझाउने कहिलेकाँही पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने काम पनि हुन्छ ।
समय दिनुभयो यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद,
धन्यवाद, जीवनको १६ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक यसरी मिडियाभित्र आएर अन्तर्वार्ता दिँदैछु, फरक खालको अनुभव संगाल्न पाएँ, यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ । अप्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा दुर्घटना अपराधका सवालमा धेरै कुरा हुने गर्दथे, आज जीवनका किस्साहरूमा अन्तरंग कुराकानी गर्ने अवसर पनि दिनुभयो । यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।